Fijoroana ho vavolombelona - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Hatramin'ny nanombohan'ny Ouzhan ny varotra manerantany dia nahazo ny tian'ny mpanjifa maro izahay:
Tena afa-po tamin'ny tolotra ouzhan aho. Haingana ny serivisy ho an'ny mpanjifa ary Gaby dia nanao asa tsy mampino ho an'ny faritra misy ahy. Tena manantena ny hiara-hiasa amin'i Ouzhan indray aho!
Mihodina haingana sy vokatra tsara kalitao. Tsy afaka mangataka mihoatra noho izany aho. Mpiara-miasa tsara i Ouzhan!
Ny ampahany dia namboarina tamin'ny maodely 3D. Nandritra ny fifanakalozan-kevitra momba ny baiko dia nahay nandinika ireo injeniera ary nanampy ahy hahita ny tsy fetezako hahafahako manitsy azy ireo. Natao kalitao avo lenta. Narahina ny fandefasana ireo entana. Ny ampahany tsirairay dia nofonosina tanteraka, niavaka tamin'ny hafa tamin'ny horonan-tsary misy sosona maro sosona. Faly aho miaraka amin'ny mpamatsy. Ny manager Chandler dia nifandray, namaly fanontaniana tamin'io andro io ihany. Manantena aho fa hanohy ny fiaraha-miasa.
Tora-bato ity fivarotana CNC ity! Tena faly amin'ny serivisy ary ankehitriny manana namana manampy ahy amin'ny baikoko aho dia manamora ny zava-drehetra. Mametraka baiko bebe kokoa aho izao, serivisy haingana ary tena sariaka. Angataho i Rio fa tsara hiara-miasa izy!
Serivisy faran'izay tsara mandritra ny dingana rehetra. Fifandraisana haingana amin'ny alàlan'ny mailaka andwhatsapp mifanakalo hevitra momba ny takiana rehetra sy ny antsipiriany ary ny santionany nomena ny sarinay izay avo lenta sy vita. Manantena ny hiara-hiasa amin'i Ouzhan izahay amin'ny ho avy izay hinoantsika fa ho fifandraisana maharitra amin'ny vokatra maro ao amin'ny portfolio.